२० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको ग्लोवलको नाफामा वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको ग्लोवलको नाफामा वृद्धि
on: १३ माघ २०७४, शनिबार १५:०५ लगानी
२० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको ग्लोवलको नाफामा वृद्धि
माघ १३, काठमाडौं (अस) । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ग्लोवल आइएमई बैङ्क लिमिटेडले रू. ९५ करोड २९ लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो गत आवको तुलनामा ५ प्रतिशतले बढी हो ।
सोही अवधिमा बैङ्कले खुद ब्याज आम्दानी थोरै प्रतिशतले वृद्धि गर्दै रू. १ अर्ब १७ करोड पु¥याएको छ । बैङ्कको हालै सम्पन्न भएको साधारणसभाले १० प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा गत आवको तुलनामा थोरै प्रतिशलते घटेर रू. १ अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।
बैङ्कले गत आवको तुलनामा अन्य सञ्चालन खर्च २२ प्रतिशतले बढाएपछि सञ्चालन मुनाफा घटेको हो । बैङ्कले दोस्रो त्रैमासमा रू. २३ करोड ३० लाख खराब कर्जा सङ्कलन गरेको छ । बैङ्कको खराब कर्जा सङ्कलन र ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफा बढ्न पुगेको हो ।
दोस्रो त्रैमासमा बैङ्कले रू. १ खर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी रू. ८८ अर्ब ९ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैङ्कको चुक्तापूँजी २४ प्रतिशतले बढेर रू. ८ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । जगेडा कोषको रकम रू. ३ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. २१ दशमलव ४४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ३७ दशमलव ९१ रहेको छ ।